रोमीइसाईहरूलाईलशेिएकोयोप्ररेणाप्राप्तपत्रलेउद्धारनतमोशाकोव्यवस्थालाईपालनगरेरआउँछ, न त व्यभिगत पण्न य वा असल आचरणद्वारा आउँछ िन्ने कनरालाई व्याख्या गरेको छ। जो-कोही व्यभिले उद्धार पाउन सक्छ िनरे पावलले व्याख्या गरेका छन्—तर उहालँ ाई पालन गने र भवश्वासद्वारा शजउने माभनसहरूलाई मात्रै परमश्े वरको अनग्रन हद्वारा यो प्रदान गररन्छ। आज माभनसहरूका लाभग अत्यन्तै महत्त्वपूणण यो सन्दशे लाई डेभिड एल. रोपर (David L. Roper) ज्यूले होशसयारीको साथ छानभबन गनणिन एको छ र यसलाई बझ्न न र अरूलाई बताउन सहज तल्न याउने भकशसमको तररकाद्वारा यसलाई प्रस्ततन गनणिन एको छ।
रोमी १—७ द्वारा लेखिएको पुस्तक डेभिड एल. रोपर (David L. Roper) पाठ्यक्रमको लागि तपाईको शिक्षक बन्नेछ र पाठ्यक्रम सकिएपछि तपाईले त्यसलाई राख्न सक्नु हुन्छ ।